Faha 60 taonan’ny fahaleovantena, fitiliana maimaim-poana amin’ny covid-19 sy ny fivoaran’ny isa - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tontosa tamin’ny 26 jona ny fanaovana ny matso tsy natreham-bahoaka nokarakarain’ny fitondram-panjakana notarihin’ny filoha Andry Rajoelina, fa olona avy amin’ny fitondram-panjakana sy ireo notsongaina nasaina ihany no nanatrika izany, sahabo ho 200. Natao teny amin’ny Araben’ny fahaleovantena ao Antananarivo. Nampitaina mivantana tamin’ny TVM sy ny RNM ary ny radio sy televiziona tsy miankina sasany ny fizotran’izany. Tsikaritra fa tsy tomombana ny fampitana mivantana tamin’ny TVM fa tapatapaka. Miisa 3120 ireo nandray anjara tamin’ny matso sy fampisehoana ireo fitaovana ampiasain’ny mpitandro ny filaminana izay noantitranterin’ny mpitantara fa fanomezan’ny filoha Rajoelina, anisan’izany ireo ‘hélicoptères’ telo nasidina tamin’io fotoana io, sy môtô ary fiarakodia. Novelomina ny fiara ‘Cadillac’ nampiasain’ny filoha Tsiranana tamin’ny Repoblika voalohany, ary dia io no nandehanan’ny filoha Rajoelina nisafo ny andian-tafika. Anisan’ny tonga nanoina ny fanasana ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka. Nambarany, araka ny fanontanian’ny mpanao gazety amin’ny haino aman-jery tsy miankina fa ny tsy fisian’ny ‘continuité de l’Etat’ no mampahantra ny firenena fa dia fanonganam-panjakana hatrany no mampiova ny fitondrana ; nomarihany koa ny famotehana ny orinasa efa nisy, anisan’izany ny OFAFA mpamokatra fanafody izay efa namokatra ‘générique’ maro ary dia io ho velomina io, efa nisy koa raha ny nambarany hatrany ny fanambarana fiarakodia teto Madagasikara toy ny 504 sy ny Karenjy.
Nohalavaina 15 andro tamin’ny sabotsy 27 jona teo ny hamehana ara-pahasalamana mihatra eto amin’ny firenena taorian’ny filan-kevitry ny minisitra ka nandraisana didim-panjakana mifandraika amin’izany. Ny alahady 28 jona tamin’ny 8 ora alina dia ny praiminisitra Ntsay Christian fa tsy ny filoha Rajoelina, toy ny mahazatra, no niresaka tamin’ny vahoaka malagasy tamin’ny fampitam-baovaom-panjakana RNM sy TVM ary noraisin’ny haino aman-jery tsy miankina samihafa. Niompana tamin’ny ady atao amin’ny ‘covid-19’ ny votoatin-dresany nandritra ny 50 minitra. Fanamafisana ny fepetra hiatrehana ny ady no nataony amin’ny ankapobeny ary ny ezaka hatao hifehezana ny tsy hihanahan’ny aretina. Ny zava-baovao tena nambarany dia ny antso atao amin’ny mpiara-belona ka manana ahiahy amin’ny fahasalamany dia ny fanatonana ny ‘Village Voara’ hanao ny fitiliana maimaim-poana amin’ny ‘covid-19’ sy ny hanomezana azy ireo safidy na hotsaboina eny raha mitondra ny tsimokaretina na hotsaboina any an-tranony, dia any no arahi-maso. Momba ny fanamaivanana ny fahasahiranan’ny olona, dia hisy indray ny tosika sy fanampiana ary ny tsena mora.
Notokanan’ny filoha Rajoelina tamin’ny alarobia 1 jolay ny ivotoerana medikaly covid-19 (CMC-19) eny amin’ny Village Voara Andohatapenaka, ilay nambaran’ny praiminisitra tamin’ny alahady 28 jona. Ao no hanaovana ny ‘essai clinique’ izay tratran’ny aretina ka manaiky an-tsitrapo hanaovana izany. Niasa dieny io andro io ity ivotoerana ity, ary maro ireo olona tonga teny an-toerana nizaha fahasalamana.
Mbola mitombo hatreto maneran-tany ny tarehimarika momba ity covid-19 ity. Maherin’ny 10 tapitrisa no fitambaran’ny tratran’ny tsimokaretina tamin’ny faran’ny volana jona raha teo amin’ny 9 tapitrisa izany herinandro talohan’izany, ary maherin’ny 500 000 ireo namoy ny ainy raha teo amin’ny 470 000 tamin’ny 24 jona.
Ho an’i Madagasikara, araka ny tatitra nentin’ny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra teny ofisialy momba ny ‘covid-19’, alefa amin’ny TVM sy RNM ary ny radio sy fahitalavitra tsy miankina samihafa, dia tsikaritra ho mitombo isan’andro ny tranga. Tamin’ny 1 jolay dia toy izao ny isa nambara : 2303 no fitambaran’ireo mitondra ny tsimokaretina, 1275 no an-dalam-pitsaboana, 1006 no sitrana, 32 no ‘cas grave’, 22 no namoy aina, ary 22 348 no fitiliana PCR natao hatramin’ny 28 jona.
Eo amin’ny ara-panahy, dia mitohy ny fotoam-bavaka tamin’ny haino aman-jery ho an’ny Fiangonana katolika tamin’ny alahady 28 jona 2020. Manao ny azy toy ny mahazatra ny RDB sy ny radion’ny diosezy. Ho an’ny fahitalavitra sy radio IBC, dia tao amin’ny EKAR Manjakaray no nanaovana izany. Ny an’ny fiangonana hafa toy ny protestanta moa dia efa misokatra fa manaja kosa ny fepetra amin’ny fisorohana ka miditra imbetsaka.
Lu pour vous : Covid-Organics, îles Eparses : Patrick Rajoelina, le communicant des dossiers délicats à la rescousse - il y a 7 jours
Télévision numérique : offre spéciale Euro 2020 et chaine culture Gasy Star avec StarTimes - il y a 15 jours